AirPods 3 waxay helayaan cusboonaysiin cusub | waxaan ka imid mac
Tony Cortes | | Gargaarka
Dhammaanteen waan ognahay in aaladaha Apple ay yihiin kuwa ugu badan ee hela cusbooneysiinta dhamaadka sanadka. In kasta oo mudnaanta ay u ekaan karto dhib, haddana waa dammaanad in la ogaado in shirkaddu ay had iyo jeer ka walaacsan tahay in aaladdayadu ay si badbaado leh u shaqeeyaan iyo horumarradii ugu dambeeyay ee lagu dhex daray nooc kasta oo softiweerka ah ee aalad kasta.
Maanta waxay ahayd markiisii 3 AirPods. Ma garanayno waxa warka cusubi keeni karo, ama inay si fudud u tahay sixitaanka khaladka gudaha. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in haddii Apple ay soo saartay, waxaa ugu wanaagsan inaan cusbooneysiinno AirPods 3 sida ugu dhakhsaha badan.
Apple waxay had iyo jeer isha ku haysaa bixinta amniga ugu sarreeya ee suurtogalka ah iyo sifooyinka qalabkeeda. Taasna waxaa lagu gaaraa joogtayn cusbooneysiinta ee software-kooda. Inkasta oo ay u ekaan karto mid dhib ku ah isticmaalayaasha, haddana waxay caddayn u tahay in Apple ay mar walba hubiso inay si habboon u shaqeeyaan.
Laga soo bilaabo dhibaatada nidaamka macOS u matali karo Macs, ilaa "fudud" firmware ee qaar ka mid ah AirTags, dhamaantood si joogto ah ayay u kobcayaan injineerada software Apple, waxaana jira dhowr cusbooneysiin ah dhamaadka sanadka.
Maanta waxay ahayd wareeggii jiilka saddexaad ee AirPods. Apple hadda soo saartay version 4C170 ee firmware-kaaga. Sida caadiga ah, shirkadu ma sharaxdo waxa cusub ee ay keento marka la barbardhigo nuqulkii hore, laakiin taasi macnaheedu maaha in aanay muhiim ahayn, taasi waa hubaal.
Sida loo cusbooneysiiyo
Iyo sida caadiga ah aaladaha qaarkood sida AirPods ama AirTags, Apple kuma ogola xoog Cusboonaysiinta gacanta ee AirPods-kaaga noocyada firmware-ka cusub. Taa baddalkeeda, shirkaddu waxay sheegtay in noocyada firmware-ka cusub lagu rakibi doono marka AirPods-ka lagu xiro Bluetooth-ka iPhone-kaaga.
Waxa kaliya ee aad ka qaban karto, waa inaad hubiso nooca la rakibay gudaha AirPods kaaga, oo uga tag iyaga oo ku xidhan bluetooth iPhone kaaga si ay iyagu isu cusboonaysiiyaan.
Si arrintan loo sameeyo, fur "Settings" codsiga on your iPhone, oo geli "Bluetooth" menu. Ka hel AirPods 3 liiska aaladaha oo taabo "i" ee ku xiga. Fiiri lambarka "Nooca" Nooca cusub ee firmware waa kan 4C170.
Haddii kani yahay nooca ka muuqda shaashadda, waxay la macno tahay in AirPods-kaaga gabi ahaanba la cusboonaysiiyay. Haddii aad leedahay mid hoose, sida kan 4C165, geli AirPods si ay u dallacaan, oo fur kiiska si aad ugu xidhid iPhone. Dhowr daqiiqo ka dib, mar kale hubi nambarka nooca oo waxaad arki doontaa inay horey u cusbaayeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » AirPods 3 waxay helayaan cusboonaysiin cusub
Doorashada Mac ugu fiican ee kulliyadda